Heat Exhaustion (အပူဒဏ်ကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Heat Exhaustion (အပူဒဏ်ကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Heat Exhaustion (အပူဒဏ်ကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း)
Heat Exhaustion (အပူဒဏ်ကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း) ကဘာလဲ။
ကုသမှု နှင့် အကြောင်းရင်းများ
အပူရှပ်ခြင်းဟာ heat stroke (သေစေနိုင်လောက်သော ပြင်းထန်သည့် အပူရှပ်ခြင်း) လောက်တော့ မပြင်းထန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာဂရုစိုက်ခြင်းမရှိရင် အပူရှပ်ခြင်းဟာ heat stroke ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ဦးနှောက်နဲ့ အခြား အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေပြီး သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်လျော့နည်းခြင်း – ရေငတ်ခြင်း၊ ရေဆာခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သတိမကောင်းခြင်း။
ဆားဓါတ် လျော့နည်းခြင်း – ပျို့အန်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း။
Heat Exhaustion (အပူဒဏ်ကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ။
ပျို့အန်ခြင်း (သို့) ဝမ်းလျှောခြင်း
အသားအရေ ဖြူဖျော့ဖျော့ ဖြစ်ခြင်း
အရည် အများကြီးသောက်ပါ။ ကော်ဖီနဲ့ အရက်ကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ကျပ်တည်းတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ပါ။
အေးစေတဲ့ ပန်ကာ (သို့) ရေခဲစိန် သဘတ်တွေကို အသုံပြုပါ။
၁၅ မိနစ်လောက်နေတဲ့အထိ အကျိုးမရှိရင် အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးကုသမှု ယူပါ။ မယူရင်တော့ heat stroke အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အပူလျှပ်ခြင်းကနေ ပြန်ကောင်းလာပြီးရင် ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပုံမှန် ပြန်မဖြစ်မချင်း မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။
အသက် – မွေးကင်းစကလေးတွေ၊ အသက်လေးနှစ်အောက်ကလေးတွေ၊ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် လူကြီးတွေဟာ အပူလျှပ်ခြင်း ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အပူကို အခြားသူတွေလို လျင်မြန်စွာ ထိန်းညှိနိုင်ခြင်း မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးရောဂါများ – နှလုံး၊ အဆုတ်၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေနဲ့ အဝလွန်ခြင်း၊ ပိန်ခြင်း၊ သွေးပေါင်တက်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ စိတ်ရောဂါ၊ အရက်သောက်ခြင်း၊ နေလောင်ခြင်းနဲ့ အခြားအဖျားတက်ခြင်း ဖြစ်ပွားစေတဲ့ အခြေအနေများ
ဆေး – အားဆေး၊ နှလုံးဆေး၊ သွေးပေါင်ကျဆေး၊ စိတ်ရောဂါဆေးများ
အပြင်မှာအရမ်းပူနေရင် အေးတဲ့နေရာမှာ နေပါ။ နေအောက်မှာ နေမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အပူလျှပ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာပါ။
အသားရောင် အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ပါ။ လျှာပါတဲ့ ဦးထုတ်ကိုဆောင်းပါ။
Heat Exhaustion. http://www.webmd.com/fitness-exercise/heat-exhaustion#1.
နွေရောက်ပြီဆိုတော့ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမလဲ ။ ။